Ganacsiga ayaa abaalmarin $ 4 milyan ah si looga dhigo dhismooyinka bulshada kuwo tamarta ku habboon - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Ganacsiga ayaa abaalmarin $ 4 milyan ah si looga dhigo dhismayaasha bulshada kuwo tamarta ku habboon
Mashruucyadu waxay keydiyaan doolar cashuur bixiye iyagoo dib u habeyn ku sameynaya iskuulada, isbitaalada iyo tas-hiilaadka dowladda hoose iyo hagaajinta kuleylka, qaboojinta iyo nidaamka nalalka si loo yareeyo isticmaalka tamarta.
OLYMPIA, WA - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington ayaa maanta ku dhawaaqday ku dhowaad $ 4 milyan oo deeq ah oo la siinayo hay'adaha gobolka iyo kuwa dawladaha hoose ee loogu talagalay 17 mashruuc oo ku saabsan tamarta tamarta taas oo bixin doonta hoos u dhac la filayo in ka badan 5 milyan oo kilowatt-saac oo koronto ah sanadkiiba - oo ku filan awood ku saabsan 480 celcelis ahaan guryo sanadkiiba.
Jawiga la dhisay wuxuu matalayaa ku dhowaad shan-meelood meel qiiqa Hawada lagu sii daayo Washington, oo ay ku jiraan qiiqa la xiriira dhalinta korontada loo isticmaalo dhismayaasha. ayay tiri Lisa Brown, oo ah Agaasimaha Ganacsiga gobolka. “Maalgalinta si looga dhigo dhismayaasha dadweynaha tamarta ku habboon waa cunsur muhiim u ah mustaqbalka tamarta nadiifka ah ee dowlad-goboleedkeena. Mashaariicdani waxay yareyn doonaan qiiqa waxyeellada u leh, waxay keydinayaan kharashaadka tamarta ee iskuulada iyo dhismayaasha kale ee dadweynaha waxayna abuurayaan shaqooyin wanaagsan oo xoojinaya bulshada gobolka oo dhan. ”
Washington's 2021 Istaraatijiyadda Tamarta ee Gobolka wuxuu qeexayaa waxtarka tamarta ee dhismayaasha inay tahay istiraatiijiyad asaasi ah oo lagu daboolayo yoolalka dearbonation. Istaraatiijiyaddu waxay bartilmaameedsanaysaa 26% hoos u dhaca isticmaalka tamarta ee dhismayaasha sannadka 2050 waxayna muujisay baahida loo qabo in gobolka uu ku hoggaamiyo tusaale ahaan mashaariicda raasumaalka dadweynaha, gaar ahaan dugsiyada, isbitaalada, iyo dhismayaasha dadweynaha ee miyiga.
Mashaariicda la soo bandhigay ee deeqaha la siiyay waa:
Magaalada Bellevue - $ 129,000 si dib loogu habeeyo loona bedelo qalabka nalalka iyo nidaamyada shan xarumood oo dab damis ah iyo Xarunta Adeegga ee Bellevue isla markaana loogu daro tiknoolajiyad mashiinka kuleylka korantada hufan nidaamka HVAC hal xarun.
Grant County Utility District - $ 429,769 si loo cusbooneysiiyo kuleylka, nalalka iyo nidaamyada xakamaynta xarumahooda Ephrata qalab cusub oo hufan oo buuxiya bartilmaameedyada looga baahan yahay gobolka cusub Nadiifi Dhismooyinka.
Isbitaalka Harborview - $ 301,239 si loogu cusbooneysiiyo nidaamka HVAC hal garab oo leh qalab yareynaya isticmaalka tamarta isla markaana taageeraya hawo qaadista iyo nidaamyada cadaadiska ee isbitaalka.
Daryeelka Caafimaadka ee Kittitas Valley - $ 500,000 si loo hagaajiyo nidaamka hawo-qaadista ee aagga qalliinka iyo waaxda gurmadka, ku rakib casriyeynta nalalka LED-ka dhammaan dhismaha, rakib qalab si loo kordhiyo waxtarka kululeeyayaasha biyaha loona beddelo qaboojiyaha loo isticmaalay in lagu qaboojiyo qalabka MRI.
Caafimaadka Dooxada Klickitat - $ 60,235 si loo beddelo loona cusbooneysiiyo qalabka iyo kontaroolada HVAC iyo nidaamyada hawo bixinta.
Lake Washington School District - $ 127,531 si loogu beddelo kontaroolada HVAC shan dugsi hoose, dib u habeyn lagu sameeyo nalalka isboortiga ee afar dugsi sare laguna rakibo matoorrada kuleylka xarunta adeegga taageerada.
Degmada Dugsiga Mukilteo - $ 39,300 in lagu daro kontaroolada hawo bixinta horumarsan ee laba jimicsi, lagu rakibo kuleylka keydinta iyo bambooyin biyo qaboojiyaha laba iskuul, kor loo qaado waxtarka kuleeliyaha hal iskuul, kor loo qaado nidaamyada kontaroolada ee seddex iskuul iyo in la bixiyo qiimeyn lagu ogaanayo laguna hirgalinayo hagaajinta qiime jaban saddex iskuul.
Degmada Dugsiga Napavine - $ 225,000 si loogu beddelo warshadda kuleylka gabowday ee dugsiga sare, loo hagaajiyo kaabayaasha HVAC loona rakibo laydh LED ah dugsiga oo dhan.
Kuleejka Waqooyiga Seattle - $ 386,974 loogu talagalay hagaajinta nidaamka illaa lix dhisme si loo buuxiyo shuruudaha Heerka cusub ee Dhismooyinka Nadiifka ah. Kuleejku wuxuu horumarin doonaa nidaamka HVAC ee hal dhisme, wuxuu xiri doonaa tuubbooyinka afarta dhisme, wuxuu ku rakibi doonaa laydhka LED-ka iyo kontaroolo cusub toddobada dhisme, shaabadda hawada ee daaqadaha iyo albaabada afar dhisme oo qiimeyn iyo hagaajin ku sameyn doona tuubooyinka siddeed dhisme si loo hubiyo inay shaqeynayaan si hufan.
Degmada Dugsiga Port Townsend - $ 469,000 in lagu beddelo nidaamka kuleylka 40 jir ee tikniyoolajiyadda kuleylka ee dhismaha weyn ee dugsiga sare, laguna daro matoorrada kuleylka ee nidaamka kululaynta dugsiga hoose oo u baahan oo keliya isticmaalka kuleyliyaha maalmaha aadka u qabow.
Kulliyadda Dhexe ee Seattle - $ 268,443 in lagu rakibo bamka kuleylka-biyaha ee dhismaha Broadway iyo laydh hufan oo LED ah iyo kontaroolo cusub oo ku saabsan dhismaha Sayniska iyo Xisaabta.
Degmada Dugsiga Sedro Wooley - $ 300,000 si loo hagaajiyo waxqabadka guud ee nidaamka HVAC ee dugsiga sare laguna badalo qalabka nalalka LED-yada.
Dugsiga Degmada Snohomish - saddex deeqo oo isku darka $ 75,800 si loo rakibo nidaamyo koontaroolid casriyeysan Dugsiga Hoose ee Cathcart, Totem Falls Elementary iyo Central Primary Schools oo yareynaya isticmaalka tamarta marka dhismaha aan la isticmaalin isla markaana kordhiya kuleylka iyo waxtarka korantada.
Kuleejka South Seattle - $ 351,297 si loo xiro hareeraha daaqadaha iyo albaabbada xarunta-ballaaran, marinnada xirmooyinka ee saddexda dhisme, dib u habeynta nalalka 18 dhisme iyo in la qiimeeyo lana hagaajiyo iskuxirka 20 dhisme si loo yareeyo isticmaalka biyaha. Sababtoo ah albaabada waaweyn ee hangar ee meheradaha ayaa inta badan looga tagey inay furan yihiin nidaamyo shaqeynaya, dareemayaal iyo kontaroolo ayaa lagu dari doonaa si loo yareeyo kuleylka iyo qaboojinta markay albaabadu furan yihiin.
Dugsiyada Bulshada ee Yelm - $ 115,628 Dugsiga Hoose ee Yelm Prairie si dib loogu habeeyo HVAC asalka ah iyo nidaamyada xakamaynta, hagaajinta hawo, raaxada iyo amniga. Mill Pond iyo Fort Stevens Dugsiyada Hoose waxay u cusbooneysiin doonaan laydhka LED-ka si loo wanaajiyo jawiga waxbarasho
Dhammaan abaalmarinta deeqaha waa shuruud, inta laga fulinayo qandaraasyada ugu dambeeya. Nidaamka deeqda ee tartanka ayaa si mudnaan leh u kala hormariyey iyadoo la saadaalinayo keydka ugu sarreeya ee tamarta iyo kharashyada hawlgalka, iyo sidoo kale iswaafajinta lacagaha ay bixiyaan codsadayaasha. Si loo taageero baahiyaha bulshooyinka reer miyiga ah, 20% maalgelinta waxaa loo qoondeeyay mashaariic ka socota magaalooyinka iyo magaalooyinka ay ku nool yihiin dad aan ka yarayn 5,000. Qaar badan oo ka mid ah mashaariicdani waxay hagaajiyaan caafimaadka, raaxada, iyo nabadgelyada dugsiyadeena guud, maktabadaha, isbitaalada iyo dhismooyinka bulshada.
"Kittitas Valley Healthcare, oo gacan ka heleysa Waaxda Ganacsiga, waxay dabagal ku sameyn doontaa talaabooyinka horumarinta waxtarka tamarta ee ka faa'iideysan doona bukaankeena iyo bulshadeena iyadoo la yareynayo raadkeena kaarboonka, cusbooneysiinta rajada qalabka muhiimka ah ee nolosha, kalsoonida iyo yareynta qarashaadka aan ku shaqeyno," ayuu yiri Madaxa Xarumaha Ron Urlacher. "Waan ku faraxsanahay inaan mashruucan bilowno."
“Dugsiga Degmada Napavine wuxuu qadarinayaa iskaashiga ay la leeyihiin Waaxda Ganacsiga,” ayuu yiri Kormeeraha guud Shane Shultz. “Mashruucani waa isku dheelitirnaan weyn oo ku saabsan keydinta tamarta iyo horumarinta kaabayaasha HVAC ee Dugsigeenna Sare. Mashruucani wuxuu saameyn deg deg ah ku yeelan doonaa jawiga waxbarashadeena xarunta. Waxaan ku faraxsanahay wada shaqeynta iyo iskaashiga aan la leenahay Waaxda Ganacsiga. ”
"Runtii waxaan sugeynaa fursadan si aan u hagaajino waxtarka tamarta dhismayaasha dhismayaashayada," ayuu yiri Howlaha Xarumaha iyo Agaasimaha Mashaariicda Caasimada Craig Grosinger. “Waxaan ku haynaa barnaamij teknolojiyad saynis sayniska oo waara (Bachelor of Applied Science Degree) halkan South Seattle College. Shaqada ay ganacsigu siiso waxay awood u siineysaa wada-hawlgalayaasha dhaqanka iyo falsafadda kulliyaddeenna; marka lagu daro keydinta lacagta jaamacadda! ”
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan barnaamijkan waxaa laga heli karaa Ganacsiga webpage.
sanduuqa tamarta nadiifka ahdeeqoWar-saxaafadeed
← Barnaamijka deeqda gargaarka bulshada ee aan macaash doonka aheyn ayaa ufuran ururada adeega ruug cadaaga ee gobolka Washington Ujeeddada Abaalmarinta Kali ah SFY 2022 Barnaamijka U-doodista iyo Ka-hortagga Ka-Hortagga Dhibbanayaasha Galmada →